Parabolan (Tren Hex) ntụ ntụ (23454-33-3) hplc ma98% | AASraw Trenbolone
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Parabolan (Tren Hex) ntụ ntụ
SKU: 23454-33-3. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Parabolan (Tren Hex) (23454-33-3), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Parabolan (Tren Hex) ntụ ntụ na-anọchite anya nnukwu ester dabeere na Trenbolone compound na ahịa, n'okpuru aha ahia Parabolan. A na-edebere mba dị iche iche ruo ọtụtụ afọ n'ọrịa na-esi n'erighị ihe na-edozi ahụ, nke ga-eme ka ọtụtụ uche dị ka anyị na-abanye n'ime ụlọ ahụ. Edekwara ya ka a na-emeso osteoporosis n'ọnọdụ ụfọdụ, nakwa dịka ịgwọ cachexia.
Parabolan (Tren Hex) uzuzu uzuzu
Parabolan (Tren Hex) ntụ ntụ bụ isi ihe
aha: Parabolan (Tren Hex) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C20H24O3
Ọbara arọ: 312.4028
agba: Yellow crystalline ntụ ntụ
Parabolan (Tren Hex) na-eji ntụ ntụ mee ihe na steroid steroid
Trenbolone Tren Hex ntụ ntụ na-akpọkarị parabolan ntụ (CAS 23454-33-3).
Parabolan ntụ ntụ Usage
"400mg / izu nke X", ma ọ bụ "500mg / izu nke Y".
Ịdọ aka ná ntị na Trenbolone Parabolan ntụ ntụ
Onye na-arịa ọrịa steroid a ga-ebu ụfọdụ mmetụta ndị nwere ike ịgwụ steroid. Otú ọ dị, ọ ga-eburu ihe ole na ole ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume bụrụ ihe pụrụ iche na hormone Trenbolone. Mmetụta dị otú ahụ na-adabere na nzaghachi. Ime nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụ nzaghachi bụ isi ihe kpatara ya. N'ihi na a ga-akpọ mmetụta ndị a dị ka ọtụtụ ndị siri ike na-eche na Trenbolone adịghị mma ma ọ bụrụ na nsogbu ndị ahụ anaghị eme. Nke a bụ ụzọ iche echiche efu. Ndị ọzọ na-eche na ị gaghị eji steroid mee ihe ọ gwụla ma ị nwere ọtụtụ afọ nke ahụmahụ steroid nke anabolic.
Ọ bụ aka nke ala ala otu n'ime ụbụrụ anabolic kasị ukwuu n'oge niile. Otu n'ime naanị steroid nke nwere ike ịbụ ihe karịrị ya ga-abụ Trenbolone Acetate. Ọ bụ ezie na ha abụọ nwere hormone Trenbolone, ọ na-adịkarị mfe karị ịnọgide na-enwe oke ọbara na hormone na mbipụta Acetate. N'ọnọdụ ọ bụla, ị nwere ezigbo ọgwụ anabolic steroid. Ọ bụghị naanị na ọ dị ike, ọdịdị ọdịdị ya dị iche iche na-ekewa ya n'ụzọ na ọtụtụ steroid nwere ike enweghị nrọ.
Parabolan ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Parabolan ntụ (CAS 23454-33-3): zụta Tren Hex ntụ ntụ si AASraw
AASraw na-enye aka ọcha 98% Parabolan (trenbolone hexahydrobenzylcarbonate) raw ntụ ntụ si bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ogwu ojiji iji nnukwu uru na mgbatị.
Parabolan ntụ ntụ Ezi ntụziaka: